Cabdijabaar Sh. Axmed — January 29, 2020
Dowladda Soomaaliya qaababkee u isticmashaa tariff-ka?
Tariff waa canshuur ay dowladda ku soo rogtay badeecado iyo adeegyada laga keeno wadamada kale qaarkiis.
Sharaxaad kale… waa canshuur uu dalku soo rogay badeecadaha iyo adeegyada laga keeno waddan kale. Tariffs-ka waxaa loo isticmaalaa in lagu xaddido soo dejinta iyadoo la kordhinayo qiimaha badeecadaha iyo adeegyada laga soo iibsaday waddan kale, taasoo ka dhigaysa badeecado qiimahooda sarreeyo, waxaana yaraan karo in la iibsado.
Dowladaha waxay shirkadaha shisheeye ee dalalkooda ka hawl gala kusoo roggaan canshuurta tariff si ay dakhli u soo saaraan ama ay uga ilaashadaan warshadaha dalka uu leeyahay – gaar ahaan kuwa liita – tartanka shisheeye.
Si kastaba ha ahaatee, canshuuraha tariff-ka waxay lahaan karaan waxyeelo aan laga fiirsan. Waxay warshadaha maxalliga ah ka dhigi karaan kuwa aan hufanayn oo aan lahayn hal-abuurnimo cusub, maxaa yeelay tartanka adag ee shirkadaha iyo warshadaha waxay la imadaan karaan isbedello xagga horumarka ah sida teknolojiyada casriga, muwaadiniinta oo hela badeecado tayo leh, qiimahiisana uu jaban yahay. Sidoo kale waxay dhaawici karaan macaamisha guryaha, sababtoo ah tartan la’aan waxay u muuqataa inay sare u qaadeyso qiimaha.
Waxay abuuri karaan xiisado iyagoo door bidaaya warshadaha qaarkood, ama gobolada juquraafi ahaan, iyo kuwa kale. Tusaale ahaan, canshuuraha tariff-ka loogu talagalay inay ka caawiyaan soo-saareyaasha magaalooyinka waxay dhaawici karaan macaamiisha ku nool miyiga ee aan ka faa’iidaysanaynin sharcigaan, waxayna u badan tahay inay lacag badan ku bixiyaan alaabada la soo saaray.
Ugu dambeyntii, isku day lagu doonayo in lagu cadaadiyo waddan ay xafiiltamaan ayadoo loo adeegsanaya canshuur celinta waxay u horseedi kartaa wareegga aargoosi aan uur laheyn, taas oo loo yaqaano ‘dagaal ganacsi.
Goormee fikirkaan soo caan baxay?
Yurubta casriga ka hor, hantida ummadda waxay ka koobnayd hanti go’an, la taaban karo, sida dahab, qalin, dhul, iyo kheyraadka kale (laakiin gaar ahaan dahabka). Ganacsiga waxaa loo arkay ciyaar eber ah oo dhalisay khasaare hantiyeed oo saafi ah ama helitaanka shabag cad. Haddii dal uu soo dhoofiyo in ka badan waxa uu dhoofiyo, dahabkeeda ayaa ku soo qulquli jiray oo xagga dibadda ka imaan jiray, oo ku baayacaya maalkeeda.
Ganacsi xudduudeed waxaa loo arkaa shaki, wadamadana aad bay u doorbidayeen inay helaan gumeysi ay ku dhisi karaan cilaaqaad ganacsi oo gaar ah, halkii ay ka wada ganacsan lahaayeen midba midka kale.
Nidaamkan, oo loo yaqaanay meerkurida, (mercantilism) wuxuu si aad ah ugu tiirsanaa canshuur bixin iyo xittaa mamnuucida ganacsiga.
Dalka gumeysiga, oo isu arkay inuu la tartamayo kuwa kale ee gumaysiga, ayaa alaabada ceeriin ah ka soo dejin jiray deegaannadiisa, kuwaas oo guud ahaan laga horjoogsaday meelaha kale iibinta agabkooda cayriinka ah. Wadanka gumeysigu wuxuu qalabka u rogayaa alaabo la soo saaray, oo ay dib uga iibin doonto gumeystihii. Canshuuraha tariff-ka oo sare loo qaaday iyo caqabadaha kale ayaa sababay si loo hubiyo in gumaystayaashu ka iibsadeen alaabada la soo saaray oo keliya kuwa gumeysteyaasha.
Dhaqaale-yaqaan reer Scottish Adam Smith wuxuu ahaa kii ugu horreeyay ee su’aal galiya xikmadda nidaamkan. Qoraalkiisii ”Wealth of Nations” waxaa la daabacay 1776, isla sanadkaas gumaystayaashii Ingiriiska ee Mareykanka waxay ku dhawaaqeen madax-bannaanida iyagoo ka jawaabaya tariff-ka badan iyo nidaamyo ganacsi oo xannibay.
Qorayaasha dambe sida David Ricardo waxay sii hormariyeen fikradaha Adam Smith, taasoo u horseeday aragtida ah faa’iidooyinka isbarbardhiga.
Aragtidaan waxay ilaalineysaa in haddii hal waddan uu ku fiican yahay soo saarista badeeco gaar ah, halka waddan kale uu ku fiican yahay soo saaridda badeeco kale, mid walbaa waa inuu ku bixiyaa kheyraadkiisa howlihii uu ka fiicnaa.
Wadamada waa inay markaas ka ganacsadaan midba midka kale, halkii ay ka abuuri lahaayeen caqabadaha ku qasbaya inay u leexiyaan ilaha dhaqaalahooda si aysan sifiican u fulin. Tariffs-ka, marka loo fiiriyo aragtidan, waa jidka koritaanka dhaqaalaha, xittaa haddii la goyn karo si looga faa’ideysto qaybaha ciriiriga ah ah iyo duruufaha qaarkood.
Tags: Waa Maxay ‘Tariff?
Next post My Way or The Highway: Villa Somalia’s zero-sum Politics is Getting Out of Hand
Previous post Baahida iyo Doonista!